Xiddig Chelsea ah oo ka farxiyey tababare Jose Mourinho, wuxuuna u furan yahay inuu Man Utd kula midoobo | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » Xiddig Chelsea ah oo ka farxiyey tababare Jose Mourinho, wuxuuna u furan yahay inuu Man Utd kula midoobo
Xiddig Chelsea ah oo ka farxiyey tababare Jose Mourinho, wuxuuna u furan yahay inuu Man Utd kula midoobo
Kubadsameeyaha reer Brazil ee kooxda Chelsea Willian ayaa ka dhawaajiyey inuu soo dhoweyn lahaa qorshe walba oo uu kula biirayo kooxda Manchester United, wuxuuna daaha ka qaaday inuu jaceyl gaar ah u hayo tababare Jose Mourinho.
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inuu ka mid yahay bartilmaameedyada ugu sarreeya suuqa kala iibsiga ee tababare Jose Mourinho, iyadoo la ogyahay in tababaraha Man Utd xagaagii lasoo dhaafay uu ka fashilmay qorshe uu doonayey inuu xiddigaan ku keeno Old Trafford.
Horraantii Isbuucaan, wararku waxay sheegayeen inay Chelsea u furan tahay isla markaana ay dhegeysan doonto dalabyada u imaanaya 28 sanno jirkaan, maadaama kooxda hanatay koobka England Premier League ay dooneyso inay isxoojiso tababare Antonio Conte ayaana isha ku haya inuu boos u banneeno xiddigaha uu kooxda keeni doono.
Shabakadda ESPN Brasil iyo Sport Witness ayaa wareysi gaar ah la yeeshay Willian, waxaana wax laga weydiiyey tababareyaasha uu lasoo shaqeeyey iyo saameynta ay xirfaddiisa ku leeyihiin, balse wuxuu daaha ka qaaday inuu jaceyl gooni ah u hayo tababare Mourinho.
“Wax badan ayaan ka bartay dhammaan tababareyaashii aan lasoo shaqeeyey,” ayuu yiri Willian. Guus Hiddink, Lucescu iyo Jose Mourinho, kaasoo ah tababare iga caawiyey wax badan isla markaana aan wax badan ka bartay sidoo kalena aan jaceyl gaar ah u hayo”.
Willian ayaa wax laga weydiiyey wararka xanta ah ee la xiriirinaya Man Utd iyo inuu la midoobayo Mourinho, balse wuxuu daaha ka qaaday inuu ku faraxsan yahay kooxda Chelsea: “Wararka xanta ah ee England waa kuwa adduunka ugu weyn, markastana xantu waa ka caadi England”.
Qandaraaska uu kula jiro Chelsea wuxuu dhacayaa sannadka 2020ka.